သမ္မာကျမ်းစာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ (မောရှေ) – အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ
သမ္မာကျမ်းစာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ (မောရှေ)
23Aug 2013 12 Sep 2018
သခင်ယေရှု မှလွဲလျှင် မောရှေ လောက်လူသိများသောသူ ဂျူးလူမျိုး တို့၏ သမိုင်းတွင် ရှိမည် မထင်ပါ။ သို့သော် နာမည် ကျော်ကြား လူသိများဖို့ အရေး မောရှေ လောက် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းဆန်သူလည်း ရှိအံ့ မထင်ပါ။ အသက် (၈၀) ပြည့်သည့်အချိန်တွင် သူ၏ ဆန္ဒတစ်ခုမှာ လူသတ်မှုကြောင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ရသော တိုင်းပြည် ကို ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုတိုင်းပြည်၏ ပြည့်ရှင် ဘုရင် ဖာရော မင်းကြီးကို တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘုရားသခင် တစ်ပါးအဖြစ် ခံယူသော ဖာရော ဘုရင်အား ဘုရားသခင်က ဟေဗြဲ ဂျူးလူမျိုး များကို ကျွန်အဖြစ် ခိုင်းစားခြင်း မှ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးရမည် ဟု မိန့်တော်မူကြောင်း ပြောရန် အတွက် သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ယာကုပ် နှင့် မိသားစု သည် မိုးခေါင်ရေရှား မှုကြောင့် ခါနန် အရပ်ဒေသ၊ ယခုခေတ် အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ ရှိရာ အရပ်မှ အီဂျစ်နိုင်ငံ သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည့် နောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း ၃၅၀ ခန့် အကြာတွင် မောရှေကို မွေးဖွါးခဲ့သည်။ နှစ်ပရိစ္ဆေဒ ကုန်ဆုံးသည်နှင့် အမျှ ယာကုပ် ၏မိသားစုဝင်တို့ သည် အလွန့်အလွန် များပြားလာကြသည်။ အီဂျစ် လူမျိုးတို့သည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံကို ယာကုပ်နှင့် အမျိုးများတို့က သိမ်းပိုက် ရယူသွားမည်ကိုစိုးရိမ် လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဖာရော ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးက ယာကုပ် ၏ အမျိုးအနွယ် အားလုံး ကို ကျွန်အဖြစ် အတင်းအဓမ္မ စေခိုင်းသည်။ အီဂျစ် ဘုရင် အဆက်ဆက်သည် ဖာရော ဟူသော ဘွဲ့နာမ ကို ခံယူသည်။ အစပိုင်းတွင် ယာကုပ်နှင့် အမျိုးအနွယ် ဟေဗြဲဂျူး လူမျိုးတို့အား ပင်ပန်းဆင်းရဲ စွာခိုင်းစေခြင်း အားဖြင့် ခလေးမွေးဖွါးနှုန်း လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်သည်။ မြို့ရိုး များ အဆောက်အဦး ကြီးများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အလုပ်ကြမ်းသမား၊ ကာယ အလုပ်သမား/သမ များအဖြစ် စေခိုင်း အသုံးပြုသည်။ သို့သော် မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်ဖြစ်သဖြင့် နောက်တဆင့် တက်ကာ မွေးကင်းစ ဂျုး လူမျိုး ယောကျာၤးလေး အားလုံးကို နိုင်း မြစ်ထဲ ပစ်ချကာ သတ်စေသည် (ထွက် ၁း၂၂)။
ထိုအချိန်အခါသမယ တွင် မောရှေကို ဟေဗြဲ မိသားစု တစ်ခုတွင် မွေးဖွါးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မောရှေ ၏ ဖခင်သည် အာမရံ ဖြစ်ပြီး ယာကုပ် ၏ တတိယသား လေဝိ ၏ မျိုးရိုး မှဆင်းသက်သူဖြစ်သည်။ သူ၏ မိခင်သည် ယောခေဗက် ဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် မောရှေအပြင် သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ရှိ သေးသည်။ မိရိအံ သည် သမီးကြီး ဖြစ်ပြီး ဒုတိယသား အာရုန် သည် မောရှေထက် သုံးနှစ်ခန့် ပိုကြီးသည်။
မိခင်ကြီး ယောခေဗက် သည် မောရှေ ကို မွေးပြီး သုံးလ ခန့် အီဂျစ် များမသိအောင် ဖွက်လာခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် နိုင်းမြစ်ရိုး တလျှောက်တွင် ပေါက်သော ကျူပင် တစ်မျိုးဖြင့် ပခက်လေး တစ်ခုကို ယက်သည်။ ထိုနောက် ရေ လုံအောင် ကတ္တရာသုတ်ပြီး သုံးလသား မောရှေ ကလေးကို ထဲ့ကာ အီဂျစ်ဘုရင်မ ရေကစား လေ့ ရှိသည့် အနီး နိုင်းမြစ် တစ်နေရာ၊ ကျူပင်များကြားတွင် ဖွက်ထားသည်။ ကလေး အရွယ် ရှိသေးသည့် အမ မိရိအံ အား မနီးမဝေး တစ်နေရာမှ စောင့်ကြည့်စေသည်။ ဘုရင့် သမီးတော် နှင့် အပေါင်းအပါများ က မောရှေ ကလေးကို တွေ့သွားသောအခါ မိရိအံ က၊ ကလေးထိန်း လိုလျှင် ရှာပေးလို ကြောင်းအရဲစွန့် ကာ မေးသည်။ ဘုရင့် သမီးတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အမ မိရိအံ ရှာပေးသော မောရှေ၏ မွေးသမိခင် ယောခေဗက် သည် ဘုရင့် နန်းတော်တွင် သမီးတော် ၏ မွေးစားသား မောရှေ ၏ အထိန်းတော် ဖြစ်သွားသည်။ မိမိ၏ သားအရင်းကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း ဝင်ငွေရရှိကာ၊ သား၏ အသက် အန္တရယ်လည်း ဝေးသွားသည်။
တရားခံ တဖြစ်လဲ မောရှေ
အီဂျစ် ဘုရင့် နန်းတော်တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသော်လည်း မောရှေသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ ဟေဗြဲ ဂျူး လူမျိုးတစ် ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိသည်။ အသက် လေးဆယ် ပြည့်အရွယ် တစ်နေ့တွင် အီဂျစ်လူမျိုး ကျွန်ထိန်း တစ်ယောက်က ဟေဗြဲဂျူး တစ်ယောက်အား ရိုက်နက် သည်ကို မောရှေ အမှတ်မထင် တွေ့သည်။ အခြားလူ တစ်ယောက်မှ မရှိဟု ထင်ပြီး မောရှေက ထို အီဂျစ်လူမျိူး ကျွန်ထိန်း ကို သတ်ပစ်လိုက်သည်။ သို့သော် နောက်တစ်နေ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးနေသော ဂျူး လူမျိူး နှစ်ယောက်ကို မောရှေ ဖြန်ဖျေ ရန်ကျိုးစားစဉ် တစ်ယောက်သော သူက မနေ့က ကျွန်ထိန်းကို သတ်ပစ်သလို ငါ့ကိုလည်း သတ်မလို့လား ဟု စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး အော်ဟစ်သည် (ထွက် ၂း၁၄)။
ဖာရောဘုရင်၏ သားတော် က အဖြစ်အပျက်စုံ ကြားသိသောအခါ မောရှေအား ဖမ်း၍ အပြစ်ပေးရန် အမိန့်ပေးသည်။ မောရှေ အသက်အန္တရယ် ကင်းရာ အရှေ့ အရပ်၊ ဆိုင်းနိုင်း ကျွန်းဆွယ် ဖက်သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သည်။ သိုးထိန်း ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော မိဒျန် လူမျိုး ယဇ်ပုရောဟိတ် ယေသရော နေထိုင်ရာ ဒေသရောက်သည် အထိ ထွက်ပြေးလာခဲ့သည်။ မိဒျန် နိုင်ငံသည် ယခုခေတ် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတည်ရှိရာ အရပ် ပင်လယ်နီ ၏ အရှေ့မြောက် ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက် တွင် တည်ရှိသည့် အရပ် ဒေသ ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် ယေသရော ၏ သိုးများကို ထိန်းကျောင်းသော သမီးများနှင့် အခြား သိုးကျောင်းသား များ ရေတွင်း တစ်ခုတွင် အခြင်းများ ခိုက်ရန်ပွါးများ သည့် အချိန်တွင် မောရှေ ရောက်ရှိသည်။ မောရှေ က ယေသရော ၏ သမီးများ ဖက်မှ ရပ်တည်ကူညီပေးသဖြင့် အခြား သိုးကျောင်းသားများ ထွက်သွားကြသည်။ ဤအကျိုးဆက်အဖြစ် ယေသရော ထံတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိပြီး ဇိပေါရ ဟု အမည်ရှိသော သူ၏ သမီးတစ်ယောက် ကို ဘဝကြင်ဖော် အဖြစ်သိမ်းပိုက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ မောရှေ နှင့် ဇိပေါရ တို့တွင် သားရတနာ ဖွားမြင်သော အခါ ဂေရရှံ ဟု အမည် မှည့်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ကား ငါသည် တကျွန်းတနိုင်ငံတွင် ဧည့်သည် အဂန္တု ဖြစ်သည် ဟု ဆိုလိုသည်။ မိဒျန် အရပ်ဒေသတွင် သူ့ကိုယ်သူ နိုင်ငံခြားသား တယောက် အဖြစ် ခံစားရ ကြောင်းနားလည်သိရှိရသည်။
နှစ်ပေါင်း ၄၀ ခန့်ကြာသော အချိန်တွင် မောရှေသည် အသက် ၈၀ ခန့် ရှိလာပြီ ဖြစ်ပြီး ယောက်ခမ ယေသရော ပိုင်သော သိုးများကို ဆိုင်းနိုင်း တောင်ခြေ တဝိုက်တွင် ထိန်းကျောင်း ရင်း အသက်ရှင်နေထိုင်သည်။ တခုသော နေ့ရက်တွင် ဘုရားသခင်သည် မီးတောက် မီးလျှံများဖြင့် တငြီးငြီး တောက်လောင် နေသော်လည်း ပြာကျ မသွားသော ချုံနွယ်ပင် တစ်ခု အားဖြင့် မောရှေကို စကားပြောသည်။ မောရှေသည် ထိုမီးတောက်လောင် သကဲ့သို့ တငြီးငြီး လောင်နေသော ချုံနွယ်ပင် ကို ချဉ်းကပ်ရာ ဘုရားသခင်က သန့်ရှင်း မြင့်မြတ်သော အရပ်ဒေသ ဖြစ်သဖြင့် ဖိနပ်ချွပ်ရန် အမိန့်ပေးသည်။ အီဂျစ် နိုင်ငံမှ ဟေဗြဲ လူမျိုးများ၏ ဆုတောင်းသံကို ကြားသိရကြောင်း ဘုရားသခင်က မောရှေကို ပြောသည်။
“သင့်ကို ဖာရော ဘုရင်ထံ ငါစေလွှတ်မည်” ဟု ဘုရားသခင်က မိန့်တော်မူသည် (ထွက် ၃း၁၀)။ ဤတွင် ဘုရားသခင်နှင့် မောရှေ အငြင်းအခုန် စဖြစ်သည်။
“ဖာရော ဘုရင်ရှေ့တော်မှောက် ကို သွားရလောက်အောင် ကျွန်တော်က ဘာ မို့လို့လဲ” မောရှေ စောဒကတက်သည်။
“ငါ လည်း မင်းနဲ့ အတူ ရှိနေမှာပါ” ဘုရားသခင်က ပြန်ပြောရင်း အားပေးသည်။
“သူတို့ ငါ့ကို ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟေဗြဲ လူမျိုးများကို မောရှေ ရည်ရွယ်ရင်း အကွန့်တက်လိုက်သည်။
“ဘယ်ဘုရားကို ပြောတာလဲ? အဲဒီ ဘုရားရဲ့ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်သလဲ လို့ ကျွန်တော့်ကို မေးကြလိမ့်မယ်” ဟု မောရှေ ကထပ်ပြောသည်။
ဘုရားသခင်က “ငါဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏၊ ငါဖြစ်သည် ဟု အမည်ရှိသော သူသည် ငါ့ကို စေလွှတ်သည်” ဟု ဟေဗြဲ တို့အားပြောရန် ပြန်ပြောသည်။
မောရှေ က ထပ်ဆင့် အကွန့်တက် ကာ ငြင်းဆန်ရန် ကျိုးစားသည်။
“သူတို့ ကျွန်တော့ ကို ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး… ကျွန်တော့ကို လိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး… မင်း ဘုရားသခင် နဲ့ ဘယ်တုန်းက တွေ့ဘူးလို့လဲ လို့ ပြန်မေးကြလိမ့်မယ်”
အငြင်းသန်လွန်းသော မောရှေ ၏ ယုံကြည်မှု ရရန် ဘုရားသခင်သည် ထူးဆန်းသော နိမိတ်လက္ခဏာ အချို့ကို ပြသည်။ သူ၏ လက်ကိုင်တုတ် တောင်ဝှေး ကို မြွေဖြစ်စေပြီး မြွေမှ တောင်ဝှေး ပြန်ဖြစ်စေသည်။
သို့သော် မောရှေ ဆက်လက် ငြင်းဆန်နေသေးသည်။
“ကျွန်တော် အပြောအဆိုမတော်ပါဘူး..အရင်တုန်းကတည်းက အခုအချိန် အထိ စကား အပြောအဆို မကောင်းပါဘူး၊ နှုတ်လေးသောသူဖြစ်ပြီး စကားပြောလျှင်လည်း နှေးနှေးကွေးကွေး ပြောသူဖြစ်ပါတယ်” (ထွက် ၄း၁၀)။
လူသားတို့ရဲ့ နှုတ်ကို ဘယ်သူ ဖန်ဆင်းထားသလဲ၊ စကား အ တဲ့သူ၊ နားပင်းတဲ့သူ၊ မျက်စိမြင်တဲ့သူ၊ မမြင်တဲ့သူ အားလုံးကို ငါ ဖန်ဆင်းထားဒါဘဲ မဟုတ်ဘူးလား ဟု ဘုရားသခင် ကပြန်ပြောသော်လည်း မောရှေ ကဆက်လက် ငြင်းဆန်သည်။
“ဘုရားရှင် ကျေးဇူးပြုပြီး အခြား တစ်ယောက်ယောက်ကို စေလွှတ်တော်မူပါ” (ထွက် ၄း၁၃)။
ဘုရားသခင်သည် မောရှေ၏ အကို အာရုန် အား မောရှေ အစား ပြောဆိုခွင့် ရှိသူအဖြစ် သဘောတူ ခွင့်ပြုလိုက်ရသည်။ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် နှင့် အီဂျစ် ဖာရောဘုရင် အကြား ပြောဆို ညှိနှိုင်းမှု သည် လွယ်လင့်တကူ ပြီးစီးမသွားပါ။ ကပ်ဆိုက်ခြင်း ဆယ် မျိုးနှင့် ဖာရောဘုရင် အပါအဝင် အီဂျစ် မိသားစု တိုင်း သားကြီး အားလုံး၏ အသက်ကို ပေးဆပ်လိုက်ရ ပြီးမှ ဟေဗြဲ ဂျုး လူမျိုး များကို ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်ခွင့် ပေးပြီး အီဂျစ် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွါခွင့် ပေးရန် စိတ် ပြောင်းလဲသွားသည်။
ရာဇဝင် တွင်သော ခရီးကြမ်း
ဟေဗြဲ ဂျူး လူမျိုးတို့၏ နှစ် ၄၀၀၀ သမိုင်း နှင့် လူသားတို့၏ သမိုင်းတလျှောက်လုံး တွင် ရာဇဝင်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော (Exodus) ဟု အမည်ရသည့် ကန္တာရ ခရီးကြမ်း ဤတွင် အစပြုသည်။ မောရှေ ၏ ဦးဆောင် မှုဖြင့် ၂. ၅ သန်း ခန့်သော ဟေဗြဲ ဂျုးလူမျိုး အားလုံး အစုလိုက် အပြုံလိုက် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ ယခု အစ္စရေးလ် နိုင်ငံရှိရာ အရပ် ဖက်သို့ ခြေလျင် ခရီးကြမ်း (Exodus) ကို စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန် ကြီးမားသော ယခုခေတ် ဘော်လုံးကစားကွင်းကြီး ၃၀ ခန့် တွင် ဘော်လုံးပွဲ ကြည့်သော ပရိတ်သတ် နှင့် ညီမျှသည့် အရေအတွက် ဖြစ်သည်။ ကန္တာရ အတွင်း သောက်ရေ အတွက် ရေတွင်း တစ်တွင်းနှင့် မဖြစ်နိုင်၊ ရေကန်ကြီး တစ်ကန် ရှိမှ အဆင်ပြေ မည့် လူဦးရေ အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ အီဂျစ် ဖာရော ဘုရင် သည် ဂျူး များကို ထွက်ခွါခွင့် ပေးပြီးမှ စိတ်ပြောင်းကာ ၎င်း၏ စစ်တပ် ဖြင့်လိုက်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ ထူးဆန်းသော နိမိတ်လက္ခဏာ အားဖြင့် ပင်လယ်နီ ရေပြင် နှစ်ခြမ်းကွဲကာ ဂျူးလူမျိုးအားလုံး ခြောက်သွေ့သော ပင်လယ်နီ ကြမ်းခင်း ကို ဖြတ်လျှောက်ခြင်းဖြင့် ယခုခေတ် ဆော်ဒီအရေဗျ ကျွန်းဆွယ်ရှိရာ တဖက်ကမ်းခြေသို့ လွတ်မြောက် သွားကြသည်။ ဖာရောဘုရင် ၏ စစ်တပ် သည် ပင်လယ်နီ ကြမ်းခင်း တွင် ဖြတ်သန်းလာစဉ် နှစ်ခြမ်းကွဲ သော ပင်လယ် ပြန်စေ့ပြီး အားလုံးပျက်စီးသွားကြသည်။ ပညာရှင်တို့ ၏ တွက်ချက်မှု အရ ပင်လယ်နီ ကို ဖြတ်သန်း သွားသည့် အချိန်တွင် အကျယ် ကိုက် ၁၀၀ (ပေ ၃၀၀) ကျယ်သော ခြောက်သွေ့သည့် မြေမာပေါ်မှ ဆိုလျှင် ဤလူအုပ်ကြီး၏ အစမှအဆုံးသည် မိုင် (၂၀) နှစ်ဆယ် ခန့် ရှိမည်ဟု ဆိုသည်။
ဤ ခရီးစဉ် အတွင်း ဘုရားသခင်သည် ဂျူးလူမျိုး တို့အား စနစ်တကျ မရှိခဲ့သော လူနေမှု၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံများမှသည် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ဥပဒေသများ၊ နည်းစနစ်များ၊ အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံ များကို သင်ပေးခဲ့သည်။ ဆိုင်းနိုင်း တောင်ရောက်သည့် အချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို အားလုံးကြားရသည်။ သို့သော် မိုးချိန်းသံ ကဲ့သို့ ကျယ်လောင်သည့် အသံတော်ကြောင့် လူအုပ်ကြီးသည် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ် ကြပြီး မောရှေ တစ်ဦးတည်း သာ ဘုရားသခင်နှင့် အဆက်အသွယ် ပြုစေပြီး ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူ သမျှအားလုံး မောရှေ ထံမှပြန်လည် နာယူရန်ဆုံးဖြတ်ကာ တောင်းဆိုကြသည် (ထွက် ၂၀း၁၉)။
ထိုအချိန်မှ စပြီး ရာနှင့် ချီသော လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ဥပဒေ များကို မောရှေ သည် ပြဌန်းခဲ့သည်မှာ နှစ်နှင့်ချီပြီး အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ ထို ဥပဒေသများသည် ယနေ့ သမ္မာကျမ်းစာ ၏ အစပိုင်းတွင် ရှိသော စာအုပ် (၅) အုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့ထိတိုင်အောင် ဂျူးဘာသာဝင် တို့၏ အလေးထား ကျင့်သုံးနေဆဲ ဖြစ်သော ဥပဒေသ များဖြစ်သည်။ ဤ ဥပဒေသ များတွင် ဘာသာတရားနှင့် ဆိုင်သော လိုက်နာရမည့် ကျင့်ထုံး ဥပဒေသများ အပြင် ယခုခေတ် လွတ်တော်ပါလီမန်များမှ အတည်ပြု ပြဌန်းသော နိုင်ငံတော် ဥပဒေ များနှင့် ဆင်တူသော အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေကျင့်ထုံးများလည်း ပါဝင်သည်။
နှစ် လေးဆယ် ခရီးကြမ်း
ဆိုင်းနိုင်း တောင်ခြေတွင် ဥပဒေကျင့်ထုံးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်နှစ်ကျော် အချိန်ကုန်လွန်ခဲ့ကြရသည်။ ထိုနောက် ခါနန် နိုင်ငံ၊ ယခုခေတ် အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ ရှိရာ အရပ်ဖက်သို့ ဘုရားသခင်၏ လမ်းပြခေါ်ဆောင်မှုဖြင့် ထွက်ခွါလာကြသည်။
ကြမ်းတမ်းသော ခရီး၊ သောက်သုံးရေ နှင့် အစားအသောက် ခက်ခဲမှုတို့ ကြောင့် လမ်းခရီးတလျှောက်လုံး အကြီးအကျယ် မကျေမနပ် မည်တွန်ကြသည်၊ complain တက်ကြသည်။ သန်းနှင့် ချီသော လူအုပ်ကြီး၏ မကျေနပ်သံများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ မည်တွန်မှုများ၊ ကွန်ပလိန်း တက်မှုများကြောင့် မောရှေ သည် အကြီးအကျယ် စိတ်ပင်ပန်ခြင်း ကိုခံစားရသည်။ ဘုရားသခင်ထံ သူ၏ မကျေမနပ်မှုကို အရေးဆိုသည် “ကိုယ်တော် . . .ဤ လူအားလုံး တို့ရဲ့ အရေးကို တာဝန်ယူထမ်းဆောင် စေခြင်း အားဖြင့် ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့ကို ငြင်းပန်း နှိပ်စက် တာလဲ” (တောလည် ၁၁း၁၁)။
ဂျူးလူမျိုးတို့အား ဘုရားသခင်အပိုင်ပေးမည် ဟု ကတိပေးထားသော နယ်မြေ၊ ခါနန် နိုင်ငံ နယ်စပ် ရောက်သော အခါ မောရှေသည် လူ ၁၂ ယောက်အား ခါနန် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို စုံစမ်း ထောက်လှမ်းရန် သူလျှို အဖြစ် စေလွှတ်သည်။ သူလျှို ၁၂ ယောက်မှ ၁၀ ယောက် က ခါနန် နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော လူမျိုးတို့သည် ကြီးမားသန်စွမ်းကြပြီး၊ မြို့ရိုးတို့သည် အလွန်အမင်း ခိုင်ခန့်ကြပါသည်၊ တိုက်ခိုက် အနိုင်ယူရန် လွယ်ကူမည် မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို အစီရင်ခံ ပြီး၊ ယောရှု နှင့် ကာလက် ဟု အမည်ရသော သူလျှို နှစ်ယောက်က အလွန်ကောင်းသော ပြည်ဖြစ်သည်၊ ချက်ချင်း သွား၍ သိမ်းယူသင့်သည် ဟု တင်ပြသည်။ လူအုပ်ကြီးသည် ယောရှု နှင့် ကာလက် ၏ တင်ပြချက်ကို လက်မခံဘဲ ကြောက်သဖြင့် ခါနန် နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက် ရန် ငြင်းဆန်သည်။ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုး နှင့် ဦးဆောင်မှုအပေါ် ယုံကြည်အားကိုးခြင်း မခိုင်ခန့်သည့် ဤဆုံးဖြတ်မှုကြောင့် ဘုရားသခင် အမျက်ထွက်ကာ ကန္တာရ အတွင်း နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း လေးဆယ် (၄၀) တဝဲလည်လည် သွားလာ နေထိုင်စေသည်။ ဘုရားသခင်ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားရန် ငြင်းဆန်ခြင်း ကို ဒဏ်ခတ်သည့် အနေဖြင့် ယောရှု နှင့် ကာလက် နှစ်ယောက်သာ ဘုရားရှင် ကတိတော်ထားရာ ခါနန် နိုင်ငံသို့ ဝင်ခွင့် ရရှိပြီး အားလုံး တစ်ယောက် မကျန် နှစ် (၄၀) အတွင်း သေကြေပျက်စီးကြသည်။ နှစ် (၄၀) အတွင်း မွေးဖွါးသူ များကို ယောရှု နှင့် ကာလက် ကဦးဆောင်ပြီး ဘုရားသခင် ကတိတော် ထားသည့် နိုင်ငံ ခါနန် နိုင်ငံ ကို ဝင်စား အမွေခံခြင်းဖြစ်သည်။
ကနဦး ခေါင်းဆောင်ကြီး မောရှေ ကိုယ်တိုင် ကတိတော် နိုင်ငံ ခါနန် ကိုဝင်ခွင့် မရခဲ့ချေ။ လမ်းခုလတ် တစ်နေရာတွင် ရေငတ် နေကြသော လူအုပ်ကြီးက မောရှေကို တဆာဆာ ရေတောင်းရာ မောရှေ သည် စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး ကျောက်တုံး ကြီးတစ်ခုအား တောင်ဝှေးဖြင့် ရိုက်ပြီး ရေထွက်စေသည်။ ထို အပြုအမှုကြောင့် ဘုရားသခင်က မောရှေအား “ဣသရေလ (ဂျူး) အမျိုးသား တို့ ရှေ့မှ ငါ့ကို မရိုမသေ ပြုခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် မောရှေ နှင့် အစ်ကို အာရုန် သည် ကတိတော်ထားရာ ပြည် (ခါနန်ပြည်) ကို မဝင်စားရ” ဟု မိန့်တော် မူသည် (တောလည် ၂၀း၁၂)။
မောရှေ သည် ခါနန် ပြည် ကို လှမ်းမြင်နိုင်သော အကွာအဝေး တနေရာ ယနေ့ ဂျော်ဒန် နိုင်ငံ အထိ ဘုရားသခင်က ရောက်ခွင့် ပေးခဲ့သည်။ ဂျော်ဒန် မြစ်၏ အရှေ့ဖက်ကမ်း တွင်ရှိသော နေဗော တောင် ပေါ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်သည့် အချိန်တွင် အသက် (၁၂၀) ရှိသည်။ သူ့ကို တစ်ခုသော လွင်ပြင် တွင် မြှပ်နှံခဲ့ကြပြီး ဣသရေလ (ဂျူး) တစ်မျိုးသားလုံး သူ့ကို အောက်မေ့ သောအားဖြင့် ရက် (၃၀) ပတ်လုံး ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း ပြုကြသည်။ (တရားး ၃၄း ၁-၁၀)။
မောရှေ ကဲ့သို့ ထာဝရ ဘုရားသခင် နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောဆိုခွင့် ရသူ လူသား၊ ပရောဖက် တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မပေါ်မထွန်းခဲ့ဖူးပါ (တရား ၃၄း၁၀)။ မောရှေ ကွယ်လွန်ပြီး နှစ် ၁၀၀၀ ကျော် ကြာသောအခါ သူ့ကို နောက်တဖန် မြင်တွေ့ကြရသည်။ သခင်ယေရှု ဆုတောင်းနေစဉ် မောရှေ နှင့် အတူ တမန်တော် ဧလိယ တို့အား နောက်လိုက် တမန်တော်များက တွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်သည် (မဿဲ ၁ရး၂)။
မောရှေသည် အစ္စရေးလ် လူမျိုးများအား လူမျိုးကြီး တစ်မျိုးဖြစ်အောင် ပထမဦးဆုံး စုစည်း၊ တည်ထောင်ခဲ့သူ၊ ဦးဆောင်မှုပေး ခဲ့သူ ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂း၂ တွင် ဘုရားသခင်သည် အစ္စရေးလ် လူမျိုးတို့၏ ကနဦး ဖခင်ကြီး အာဗြဟံအား အောက်ပါအတိုင်း ကတိတော် ပေးခဲ့သည်။
“ငါသည်သင့်ကို လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ ငါကောင်းကြီးပေး၍ သင်၏နာမကိုကြီးမြတ်စေမည်။ သင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးသောသူကို ငါကောင်းကြီးပေးမည်။ သင့်ကို ကျိန်ဆဲသော သူကိုငါကျိန်ဆဲမည်။ သင်အားဖြင့် လည်း လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
ဤကတိတော်၏ ပထမပိုင်း “လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်” ကို ပြည့်စုံစေရန် ဘုရားသခင်သည် မောရှေ ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်သည့် “သင်အားဖြင့် လည်း လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်” ဆိုသည့် အပိုင်းကို ပြည့်စုံစေသောသူသည် သခင်ယေရှုဖြစ်ပေသည်။
Tags: Aaron, မောရှေ, မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ, Jochebed, Miriam, Moses, Old Testament, Thawngno
Previous Aunty Nang Doi’s Life Long Testimony
Next If God be for us, who can stand against us
Pingback: သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေမာေရွ) | Calvary Burmese Church